Taariikhda Doorashada iyo sida la isku khiyaano. - XAL DOON
Home ARTICLES Taariikhda Doorashada iyo sida la isku khiyaano.
Ha galin Doorasho Adiga oo aan wax ka ogaan taariikhda Doorashooyinka. Somalia Sannadkii la soo dhaafay waxaa ka dhacay Doorashooyin lagu wareeray, Sanadkaana waxa jirayo doorashooyin badan. Bal aan wax ka ogaano Taariikhda Doorshooyinka iyo farsamada la ciyaaro.
Doorasho waxaa bilaabay Greek iyo Romankii hore ee casriyadii dhexe ( Medieval age) Boqorada Romanka iyo Madaxda Kaniisadaha. Sida ka muuqato Lacagtii hore ee Romaanka ( F.S: 1aad) iyo warqad codeeynta UK ee 1880 (F.S: 2aad).
Dalka Hindia Casirigii “Vedic” Hogaamiyayaasha “ Raja “ waxaa dooran jiray “ Gana “ oo ah Ururada Qabiilada. Raja, asal ahaan waa Dabaqada dagaal yahanada oo loo yaqiin “ Kshatriya Varna” Codka waxaa lagu ridayay Dhari waxaana loo geeynayay Boqor Gopala ( 750-770 CE)
Dhinaca Bangal waxaa wax dooranayay Madaxda deegaanada, Codkana waxaa loo geeynayay Boqor “Chola” 920 CE oo xakumayay “Uthiramerur” oo ah halka maanta loo yaqaan “Tamil Nadu” codka waxaa lagu dhiibanayay Caleenta geed Qumbaha oo dhalin yaradu soo ururiyeen, kadibna lagu qorayo magaca la doortaha.
Doorashada casiriga ah waxa ey Yurub iyo Mareykanka ka bilaabatay Qarnigii 17aad, waxaana gacanta ku hayay Dabaqada wax Xakunto iyo Maalqabeenada gaar ahaan kuwii lahaa dhulka wax laga beero.
Muddo kadib, Waxaa batay doorashootinka loo yaqaan “Show Elections” oo ku dhisan kali talisnimo, oo aan loo ogoleeyn Mucaaradka, codeeyntuna ey tahay “HA” oo kaliya sida tii uu sameeyay kacaankii Somaalidu oo la sii yaqaan Qofka la dooranayo loona yaqiin “predetermined elections”. Mar marna waxaa wadamada qaar ka dhacayay doorashada loo yaqaab “Backfire” oo Qofkii loo filayay guusha looga shubto, ama nuuca la midka ah ee loo yaqiin “ Suppression Candidate” oo ah in la cadaadiyo ama la xiro Musharaxa in uu guuleysanayo looga shakiyo sida ka dhacday meela ka mid ah Dalka . ( F.S: 3aad)
Wey badan yihiin Nuucyada Doorashooyinku, waxaana ka mid ah: Plurality System, Majority System, Proportional System, Mixed System, Additional Feature System, Primary System, Indirect System iyo kuwa kale.
Meelaha la isku khiyaano waxaa ka mid ah. Guddiga doorashada, Waqtiga doorashada, Goobta doorashada, yaa wax dooran karo?, yaa la dooran karaa?, yaa codka tirinayo?, yaa ansixinayo?, side loo tirinaa?, kharaj la ogolyahay in doorashada lagu bixiyo?, yaa leh kharajka la isticmaalayo?, iyo wax yaaba kale.
Josef Stalen Hogaamiyihii Ruushka ayaa yiri: Muhim ma ahan Tirada codadku, ee waxaa muhim ah cidda tirinee iyo Cidda Diyaarine doorashada ( F.S: 4aad).
Inta badan Doorashooyinka Caalamka waxaa looga guuleeystaa Kooxda iska aaminto in Cadaalad eey ku dhamaanee oo Codadkooda la baa’biyo ( F.S: 5aad). Badaana wadamada waxaa ku guuleeysta kooxaha leh Lacagaha badan ama Kooxaha laga tirade badan yahay oo is ticmaalo farsamo khiyaano sida Yuhuuda mareeykanka ama Axsaabta Reer yurub qaarkood.
Badanaa doorashada aan Cadaalad u dhicin waxa wey keenaan, kalsooni daro, Xukun laciif ah oo ku dhamaado Afgambi Ciidan ama Kacdoon shacab, Aar goosi Qabiil iyo bulshada oo kala furfuranto, kuwaa oo qoraalo badan laga qoray sida Buuga “Corrupt Elections” ( F.S: 6aad).
In Somalia 1969 kacaan ka dhasho waxaa u sabab ahaa Doorashadii 1969 ee lagu shubtay taa oo fursad siisay Ciidamada, iyada oo weli la isku heeystay kuraasta qaar oo Maxkamadana dacwo ka tiil.
Fiiri, tii Kenya ee ugu dambeysay iyo Tii George Bush ee Mareeykanaka Sanduuqyadii codadka qaar laga soo dhax qaaday dhismooyin kaniisado duqoobay oo laga guuray.
Waxaa jira hab Cadaalad ah oo Islaamka lagu yaqiin in ey isku doortaan dhaxdooda iyo shuruudihiisa, Laakin somalidu ma isticmaasho, malaha Qof shuruudahaa leh ayaan jirin, ama si ogaal ah ayaan u dooranay kuwa kale oo Cadaalada ka fog kuna dhisan Khiyaano, Awood Maamul iyo Shakhsiyaad aan damiir leheeyn oo la doorto ama wax doorto.
F.G: Maahan Qoraal siyaasadeed, ee waa qormo ku saabsan Taariikhda Doorashooyinka, wixii ka dhiman ku dar wixii ka khaldana ka sax.